Kushanda kweecommerce mune yemitambo chikamu | ECommerce nhau
Zvemagetsi zvekutengeserana ndeimwe yenzvimbo iyo makambani anogovera huwandu hukuru hwekuyedza uye hupfumi zviwanikwa uye vane zviitiko mumabhizimusi niches akabatana nemitambo zvakakosha kwazvo. Chero zvazvingaitika, mune yemitambo chikamu, kufambira mberi kwayo kwakadzora mukati memakore maviri apfuura kubvira zvazosvika mutero wakazara wemamiriyoni makumi mana nemasere emamiriyoni, chii chinoita a 6 % yakawanda kupfuura mukota yapfuura, maererano neazvino dhata yakapihwa neNational Markets uye Makwikwi Commission (Cnmc).
Mukati meichi chirevo chizere, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti vashandisi vanotenga online vanoenda 5,8 kanomwe pamwedzi kumitambo ecommerce saiti; chikamu icho mugore rapfuura chaive 4,9 uye izvo zviri kure nekushanya kwese kunotenga, zvinova zvakapetwa ka54,5 paavhareji yemwedzi. Muchiitiko cheyakawanda-chikamu, iyo frequency iri makumi matatu neshanu pamwedzi uye mune fashoni, 35.
Izvi zvinotitungamira kuti tiongorore zvikamu izvo nyika yemitambo inogona kuchinjika kuzvitoro zvemadhijitari kana mabhizinesi. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zviripo uye hongu zvisikwa zvakasiyana-siyana, sezvatichaona pazasi. Kuve imwe yemabhizimusi akakosha zvakanyanya ayo akabatanidzwa muecommerce panguva ino chaiyo.
1 Chikamu chemitambo: mbatya
2 Mune online gyms
3 Kutengesa pamhepo kwezvinhu zvemitambo
4 Zano pakutenga pamhepo
5 Zvimwe zvekufunga nezve online mitambo yekutengesa
Chikamu chemitambo: mbatya
Ichi ndicho chiratidzo chekutanga icho chikamu chinopa mukati medhi yedhijitari uye imwe yeane simba kwazvo anogona kuwanikwa panguva ino. Nekuda kwekuputika kwevanhu vakasarudza chimwe chiitiko chine chekuita nekurovedza muviri kana chero mhando yemitambo, vese vari vaviri kana muzvikwata. Kusvika padanho rekuti mamwe emafemu ekutengesa aya ari pamusoro pechinzvimbo nezve kubhadharisa online kuSpain, sekureva kwezvazvino muchikamu ichi.
Ndichiri kune rimwe divi, zvinonyanya kukosha kuti nekuda kwekuvandudzwa kweCommerce, vatambi vanongowana kutengwa kwemarudzi ese ezvinyorwa munyika nepasirese kuburikidza neInternet kubatana. Kuti uve nawo mumaminetsi mashoma zvinhu zvako zvaunoda kana uchitenga mbatya dzemitambo.
Iine zvikamu muzvitoro zvepamhepo sezvakasiyana, senge shangu, sweatshirt, t-shirts uye a hwakawanda nhumbi kudzidzira mutambo kubva zvino zvichienda mberi. Nemitengo inoderedzwa zvichienzaniswa nezvitoro zvepanyama kana zvakajairika. Kuburikidza nekutengesa zvemagetsi kuri kusvika padanho rakakura kwazvo.
Mune online gyms
Hatigone kukanganwa kukosha kweichi chiitiko chemuviri mukusimudzira ecommerce. Zvakanaka, mupfungwa iyi, inofanira kusimbiswa izvozvo zvinobatsira Kutanga online gym pane zvakasiyana, senge izvo zvatiri kuzokupa panguva ino:
Maawa marefu anowedzera huwandu hwevatengi gore rega.
Mitengo yacho ichave yakadzikira zvine chekuita nemitengo yemitambo yechinyakare, uye nekureruka kukuru kwekusimudzira.
Iko kushandiswa kukuru kwezvivakwa zvaro uye izvo zvavanotendera vashandisi kuve nazvo kubva panguva iyoyo mukana wakakura mukusarudza mitambo yekudzidzira.
Nepo kune rimwe divi, pane chimwe chinhu chaungave usina kuziva uye icho chinosanganisira kuona kuti vateereri vakapatsanurwa padanho rino kunowedzera kutendeuka uye, nekudaro, kutengesa. Mune mamwe mazwi, iwe uchave nekuonekwa kwakakura mubhizinesi rako kupfuura mune zvakajairwa kana zvechinyakare mafomati uye uyu mukana uri pachena wekusarudzira bhizinesi riine hunhu uhu.
Kutengesa pamhepo kwezvinhu zvemitambo
Muitiro unowedzera wemitambo wakonzera kudikanwa kuri kuwedzera kwekutendeukira kune zvimwe zvinhu zvemitambo kupfuura zvazvaive. Kubva pane chimwe chinhu, hapana mubvunzo kuti iyi ndeimwe yemabhizimusi ari kubuda kubva zvino kubva zvino. Nesimba rekukura iro rinotariswa nevanoongorora maindasitiri zvakanyanya kwazvo. Uine zvishoma zvigadzirwa kuzvitangisa uye izvo zvinogona kuve zvakagadziriswa kubva munzira dzekutengesa zviri nyore pane mune mamwe mabhizinesi zvikamu.
Nepo kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutengeswa kwepamhepo kwezvinhu zvemitambo kunopa mikana mizhinji yebhizinesi kune vatsva vemabhizimusi. Uye pakati pazvo zvinotevera zvinobuda pachena.
Mhando dzese dzezvishongedzo zvekuchengetedza uye manejimendi yechikamu chakanaka chezviitiko zvemitambo. Zvese zviri zviviri zvine chekuita nekungoti kurovedza muviri uye kwayo chaiyo manejimendi.
Zvishongedzo muwardrobe uye izvo zvasvika kune yakakosha pre-simba mumakore apfuura maererano nezvinodiwa nevashandisi pachavo. Uye iwo anotangira kubva kuchinyakare masweatshirt kuenda kuzvinyorwa uko kwekuchengetera mbatya dzemitambo kubva kune chero mutambo.
Izvo zvakasiyana siyana zvemitambo zvinyorwa zvine chakasarudzika chinongedzo nehutungamiriri hweaya epanyama zviitiko uye izvo zvakabuda mumakore achangopfuura nekuda kwezvinodiwa nevanhu vanoita imwe mhando yemitambo.
Zano pakutenga pamhepo
Kusimuka kwe kugwinya, kumhanya nemitambo yakafanana izvo zvave zvemafashoni mumakore achangopfuura zvakabatanidzwa mukusimudzirwa kwekutengeserana kwemagetsi, kuve nehukama hwakakura nemumwe. Kune vazhinji vanodhira muwebhu vachitsvaga iwo akanakisa mitengo pazvipfeko zvemitambo, mabhutsu, mabhandi echiuno ekutora kurova kana zvekuwedzera zvemitambo. Zvitoro zvinogona kutengesa zvigadzirwa zvese izvi, kana, sezvazvinoitika kazhinji, ivo vane hunyanzvi mune chimwe chazvo uye vanotopa zano kumubatsiri mukuru kuburikidza newebhusaiti yavo kana foramu yemibvunzo.
Kuita ino nzira yekutengesa, ichokwadi kuti nhevedzano yezvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa. Iko kunenge kuchikosha kwazvo kuti iwe uise chimwe chinhu chako chaunoda kuitira kuti pasave nekudzokerazve mumutsara webhizinesi iwe wawakafunga kuita kubva zvino zvichienda mberi. Kusvika padanho rekuti kirasi iyi yevanamuzvinabhizimusi muchikamu chemitambo ndeyekuti iwe unogona kuona yekutengesa pamhepo semukana webhizimusi rekusimudzira rako rebasa. Nemipiro inotevera yatinotaura pazasi:
Mitengo yacho ndiyo yakanakisa mumusika, ine zvikosoro zvakakosha zvikuru uye zvinoderedzwa zvichienzaniswa nemitengo yepakutanga iyo inotangwa kubva kuzvitoro zvepanyama kana zvakajairika.
Iko kusununguka uye nyore kutenga zvinhu kubva kumba kana chero imwe nzvimbo kunowanikwa mushandisi kana mutengi. Panguva ipi neipi yezuva, kunyangwe pakupera kwevhiki kana husiku.
Dzinenge dzese nzira dzekubhadhara dzinogoneswa muInternet kutengesa dzinotsigirwa. Kubva pane echinyakare kiredhiti kana makadhi ekubhengi kune akanyanya matekinoroji masisitimu, senge zvemagetsi kubhadhara.
Iko kuchinjika kwekutonga maitiro ezvekutenga izvi uye izvo zvinogona kuve zvakasarudzika zvichienderana nezvinodiwa nevashandisi kana vatengi pachavo. Nezvakanaka zvese zverudzi urwu rwekutengesa kuita.
Iko kumhanyisa kurasa izvi zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zvine chekuita nebazi remitambo. Nekuti zviripo, nekudzvanya kamwe chete une zvaunoda mumaawa makumi mana nemasere. Pasina ino yekutengeserana inoshanda ine zvakashata pachiyero cheako account account. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe uchave uine akakosha madhora pamitengo inogoneswa kubva kudhijitari mapuratifomu.
Nedzimwe dzakateedzana tsika, pakati padzo zvinotevera kumira izvo isu tinonongedza kwauri kubva zvino zvichienda mberi:
Vatsigiri vemitambo uye hupenyu hune hutano
Kunaka mukushandira vatengi
Bvisa ruzivo rwevashandisi
Inoshanda uye inoshanda nzira
Mhando dzakasiyana dzemhando uye zvigadzirwa
Tarisa pane zvabuda uye kusimba mukati mesangano uye nechikwata
Hutungamiriri hwakatemerwa hune nhengo yega yega yechikwata
Zvimwe zvekufunga nezve online mitambo yekutengesa
Ndichiri kune rimwe divi, nechitoro kana yeInternet commerce yakasarudzika mune ino yakasarudzika mutsara webhizimusi zvaizove zvinogoneka kwete chete kukura maererano nehuwandu hwehuwandu zvaizovabvumidza ivo kudzoka zvirinani pane investimenti. Ichi chimwe chikamu chaunofanira kufunga nezvacho kubva zvino zvichienda mberi.
Hazvishamise kuti, chimwe chezvinangwa zvikuru zverudzi urwu rwebhizimusi repamhepo ndechekuwedzera kutengesa mue-Commerce. Asi kwete izvo chete, asi zvakare gadzira mhando yemhando kune webhu uye kushambadza iyo yekutengesa mhando, pakati pezvimwe zvinhu. Iko kuchazove kuri kudikanwa kuti uongorore kuti zvinodikanwa pamusoro pezvimwe pfungwa chokwadi che gadzira chimiro chitsva yakanyanya granular kutenga uye yekutsvaga mishandirapamwe, yakasimba zvakakwana kuti iise ese zvigadzirwa mitsara uye seinoshanda sezvinobvira.
Uye pakupedzisira, uye nezve network yekutenga, mishandirapamwe yakasikwa nezvakakosheswa zvichienderana nerudzi rwekutsvaga (generic kana refu muswe, pakati pezvimwe zvakakosha).
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kushandiswa kweecommerce mune yemitambo chikamu